पनौती किन छुटाइयो ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पनौती किन छुटाइयो ?
वैशाख २९, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — पनौतीको नाम नसुन्ने कमै होलान् । पनौती कसरी पनौती बन्यो ? योचाहिँ कमैलाई थाहा हुन सक्छ । पनौती नेपालकै ठूलो तीर्थमध्ये एक हो जहाँ १२ वर्षे कुम्भ मकर मेला लाग्छ । काठमाडौं उपत्यका ताल हुँदा नै गौतम ऋषिले वासस्थान बनाएको ठाउँ हो पनौती । गौतम र उनकी श्रीमती अहिल्याले सुखद जीवन बिताएको ठाउँ पनि पनौती हो ।
इन्द्रले अहिल्याको सौन्दर्यमा मोहित भएर कुदृष्टि राख्नाले इन्द्र र अहिल्या दुवैले गौतम ऋषिको श्राप पाएको ठाउँ पनि पनौती नै हो ।
गौतम ऋषिले इन्द्रलाई दिएको श्रापबाट मुक्त हुन शिवलिंग बनाएर १२ वर्ष तपस्या गरेको ठाउँ यही पनौती हो । उनै इन्द्रले बनाएको शिवलिंगमाथि बनेको इन्द्रेश्वर मन्दिर नेपालकै प्राचीन मन्दिरको रूपमा ८ सय वर्षदेखि ठाडै छ । इन्द्रले पनौतीमा १२ वर्ष तपस्या गरेर आफू श्रापमुक्त भए भने अहिल्याले रामको आगमनसम्मको समय पर्खेर बस्नुपर्‍यो । गौतम ऋषिको श्रापबाट पत्थर बनेकी अहिल्या रामको पाइला पर्नेबित्तिकै श्रापमुक्त भएर स्वर्ग प्रस्थान गरेकी थिइन् । उक्त पत्थर इन्द्रेश्वर मन्दिर परिसरमा अझै छँदैछ । यो यथार्थ थाहा नभएरै होला रामायण सर्किटमा पनौती छुटेको हुन सक्छ अथवा यो तथ्य लुकाइएको पनि हुन सक्छ । यो तथ्य कसैले लुकाउँदैमा लुक्दैन । यो आलेखमा उल्लेख गरिएको इन्द्रेश्वर मन्दिर, शिवले इन्द्रलाई श्रापमुक्त गराउन हरेक १२ वर्षमा लाग्ने मकर मेला, मन्दिरको उत्तरतिरको पत्थर त यसैका प्रमाण हुन् । यदि गौतम ऋषि, अहिल्या, इन्द्र र राम पनौती नआएको भए पनौती भन्ने नाम नै रहँदैनथ्यो । नेवारी शब्दहरू ‘पँ’, ‘ल्हों’ र ‘टी’ बाट अपभ्रंश भई पनौटी बनेको हो । ‘पँ’ को अर्थ बाँस, ‘ल्हों’ को अर्थ ढुङ्गा र ‘टी’ को अर्थ टुसा हो । गौतम ऋषिले आफ्नी श्रीमती अहिल्या र आफ्नै स्वरूपको इन्द्र एउटै ओछ्यानमा भेटेपछि दुवैलाई श्राप दिएका थिए । गौतमले इन्द्रलाई शरीरभरि योनी होस् र अहिल्यालाई पत्थर होस् भन्ने श्राप दिएका थिए । यो श्रापबाट मुक्त हुन ब्रह्माको सुझावअनुसार इन्द्रले बाँसको लौरो टेकेर संसार भ्रमण गर्दा पनौतीको एउटा ढुङ्गामा बाँस बिसाएको मात्रै के थियो, त्यही ठाउँमा लठ्ठी टुसायो । टुसा निस्किएपछि त्यही ढुङ्गामा इन्द्रले शिवलिंग स्थापना गरेका थिए । ब्रह्माले जुन ठाउँमा यो लौरोबाट टुसा निस्कन्छ, त्यही ठाउँमा शिवलिंग स्थापना गरेर १२ ववर्ष तपत्या गरेपछि शिवले श्रापमुक्त गर्नेछन् भन्ने सल्लाह दिएका थिए । ढुङ्गामाथि बाँस टुसाएकोले पनौतीको नाम ‘पँल्होंटी’ रहन गएको थियो । यही शब्द अपभ्रंश हुँदै पनौती बनेको हो ।
गौतमको श्रापले पत्थर बनेकी आहिल्यालाई राम पाउको स्पर्षले श्रापमुक्त भएको भन्ने रामायणको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो । राम पनौती आएका यति धेरै प्रमाण छन् । तर, अहिले रामायण सर्किटको कुरा आउँदा पनौती कसरी छुट्यो ? यदि पनौती छुटाउने हो भने रामायण सर्किट अधुरो रहन्छ । यो कुरा नेपाल र भारत दुवै सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । आठ सय वर्षदेखि ठाडै रहेको इन्द्रेश्वर मन्दिर, गौतम तपस्या गरेको पुण्यभूमि, रामले पाइला टेकेको पत्थर, त्रिवेणीघाट, १२ वर्षे कुम्भ मेला, स्थानीय संस्कृतिले गर्दा नै सिङ्गो पनौतीलाई चाँडै युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दै छ । यो नेपालको कुनै सहर वा बस्ती मात्रै होइन, अब विश्वकै सहर बन्दै छ । त्यसैले रामायण सर्किटमा पनौती छुट्नु हुँदैन । (संस्कृति र सभ्यताले सिंगो पनौतीलाई नवजीवन दिन लागिरहेका सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीसँग मकर श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)
अद्भुत अन्नपूर्ण फोटोयात्रा
वैशाख २९, २०७५ दीपक परियार
काठमाडौँ — मोटर, धूवाँधूलो, कोलाहल छोडेर केही दिन घुम्न निस्कने योजना बुनिरहेकाका लागि अन्नपूर्ण सेन्चुरी पदयात्रा उपयुक्त रोजाइ बन्न सक्छ ।
एबीसी पुग्ने तीन पदयात्रा मार्ग छन् । हेमजा फेदी, वीरेठाँटी र म्याग्दीको तातोपानी एबीसी प्रवेश गर्ने तीन नाका हुन् । फेदी र वीरेठाँटीबाट पदयात्रा गर्दा एक हप्तामा पूरा गर्न सकिन्छ । तातोपानीबाट भने १० दिन लाग्छ । फेदीबाट पर्यटकीय गाउँ धम्पुस, तोल्का हुँदै लान्द्रुकमा पहिलो दिन बास बस्न पुगिन्छ । लान्द्रुकबाट दोस्रो दिन न्युब्रिज, झिनु हुँदै छोम्रोङ पुग्न सकिन्छ । वीरेठाँटीबाट प्रवेश गरे घान्द्रुक, झिनु हुँदै छोम्रोङ पुग्नुपर्छ ।
छोम्रोङबाट मोदीलाई दायाँ पारेर सिनुवा, बम्बु, दोभान हुँदै तेस्रो दिन हिमालयमा बास बस्नुपर्छ । हिमालयबाट देउराली, माछापुच्छ्ेर बेस क्याम्प हुँदै चौंथो दिनमा ४ हजार १ सय ३० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगिन्छ । आधार शिविर चारैतिर हिमालैहिमालले घेरिएर थपक्क बसेको छ । अन्नपूर्ण प्रथम, दोस्रो, अन्नपूर्ण साउथ, माछापुच्छ्ेर, हिमचुली, गन्धर्वचुलीलगायत हिमाल आँखै अघि ठोक्किन्छन् । पाँचौं दिन बिहान एबीसीबाट हिँडेपछि बम्बु वा दोभानमा बास बस्न आइपुगिन्छ । त्यहाँबाट कस्सिएर हिँडे छैटौं दिन झिनु आएर बास बस्दा राम्रो । सातौं दिन बिहान झिनुको तातोपानीमा डुबेर थकान मेट्न सकिन्छ । त्यहीं दिन घान्द्रुक हुँदै पोखरा फर्किनु उत्तम हुन्छ । एबीसीसम्म पुग्न सबै मौसम उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि बर्खा र हिउँदमा बाटो केही अप्ठेरो हुन्छ । छोम्रोङसम्म सुविधासम्पन्न होटल एवं लज भए पनि त्यसउता भने जम्मा २६ वटा होटल छन् । पर्यटनको मौसममा जसोतसो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपालीका लागि करिब १० हजार रुपैयाँले मज्जाले एबीसी पुगेर फर्कन सकिन्छ ।